Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Hotels & Ebe ntụrụndụ » Regis San Francisco na -akpọ aha onye isi njikwa ọhụrụ
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Regis San Francisco kwupụtara nhọpụta Roger Huldi dịka onye isi njikwa ọhụrụ
Regis San Francisco, adreesị obodo nke mbụ maka ụlọ obibi okomoko, ọrụ amara na ịma mma na -adịghị agafe agafe, nwere obi ụtọ ịkpọsa nhọpụta Roger Huldi n'ọkwa onye isi njikwa. Onye ndu ọrụ ile ọbịa nke ọma amaara maka imepụta mmemme na mmemme na -aga n'ihu, Huldi bụ onye ọka iwu ụlọ ọrụ nwere ahụmịhe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 na -arụ ọrụ na Marriott International na Starwood Hotels na Resorts.
Regis San Francisco kwupụtara nhọpụta Roger Huldi dịka onye isi njikwa ọhụrụ.
Huldi bụ onye ndu ọrụ ile ọbịa nke ọma ama ama maka imepụta mmemme na atụmatụ na -aga n'ihu.
Huldi bụ ọkaibe nke ụlọ ọrụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30 nke ahụmịhe na -arụ ọrụ na Marriott International na Starwood Hotels na Resorts.
Huldi sonyere St Regis San Francisco ka afọ asatọ gachara dịka onye isi nchịkwa W San Francisco, ebe o duuru ihe ahụ gaa na asambodo LEED Platinum wee webata mmemme siri ike ma ugbu a na-emegharị ụwa niile. N'ịkwado onye ndu Huldi, ụlọ oriri na ọ Americanụ Americanụ America na Ụlọ Nlekọta aha ya bụ W San Francisco Hotel 2016 nke Afọ.
Huldi kwuru, "Enwere m nsọpụrụ ịbanye n'ọrụ onye isi njikwa na St. Regis San Francisco, onye ama ama n'ụwa niile maka ịdị mma ya na ọrụ ịtụ anya ya." "Ọ bụ nganga dị ukwuu na m sonyere ndị otu nplaomi na St. Regis San Francisco ka anyị na -ezute mmasị nke ọgbọ ọhụrụ nke ndị njem ma na -ejigide ụkpụrụ ziri ezi nke akara ngosi St. Regis."
Onye isi nri a zụrụ azụ nke ọma, ụzọ Huldi na ụlọ ọrụ ile ọbịa bụ site na ọrụ iduzi nri na kpakpando ise, akụrụngwa okomoko, nke mbụ na Switzerland obodo ya na Australia, ebe ọ nwetara nzere Bachelor of Business Administration na Mahadum Bond.
Huldi bụ onye na -anya ụgbọ mmiri na onye na -anya ụgbọ mmiri na -anụ ọkụ n'obi, na -enwe mmasị ịkwọ ụgbọ mmiri na San Francisco Bay, ọ na -enwekwa mmasị iso nwunye ya na -eme ogologo njem n'ọtụtụ ụzọ ụkwụ ụkwụ. Ọ bụkwa onye na -akeepụ a beeụ, nke dabara n'ụzọ zuru oke na mmemme ịkpa a theụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ na ntinye aka na omume na -adigide.
Huldi bụ onye otu bọọdụ na -arụ ọrụ San Francisco Njem Njem, Ụlọ oriri na ọ Hotelụ Californiaụ California na Association Association Ụlọ ọbịa, na Councillọ nkwari akụ nke San Francisco.
Regis San Francisco na-enye ọnụ ụlọ na ime ụlọ 260, nke ụlọ ọrụ ama ama ama dị na Toronto Chapi Chapo chegharịrị n'oge na-adịbeghị anya. Ndozigharị ahụ juputara na square oghere 15,000 nke St. Regis San Francisco nke oghere nzukọ na ihe omume, na -ekepụta mpaghara anụcha, ntụsara ahụ na nke mepụtara iji kwado mkparịta ụka na imekọ ihe ọnụ. Regis San Francisco, dịka ọ dị na ihe niile dị na St. Regis, ama ama maka mbinye aka nke Butler Service ya.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara The St. Regis San Francisco na ọtụtụ onyinye ya, biko gaa ebe a.